‘विकासको नाममा फासिवाद आउने खतरा छ’ « Naya Page
‘विकासको नाममा फासिवाद आउने खतरा छ’
प्रकाशित मिति : 24 April, 2018 8:11 am
नेतृत्वमै रहेर पनि स्थायी प्रतिपक्षीजस्ता लाग्छन्, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल । तीन वर्षअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमार्फत् नेपाली समाजको फेरिएको चरित्र र अब लिनुपर्ने नीतिबारे आफ्ना एजेन्डाहरू अनुमोदन गराउन सफल भए पनि उनी पार्टीभित्र भूमिकाविहीनजस्तै राखिएका छन् । रुपन्देहीका सांसद भुसालले नेपालसँग विस्तृत कुराकानी गर्दै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारले लिएका विकास समृद्धिसम्बन्धी सुरुआती कदमप्रति संशय व्यक्त गरे । अनि, वाम एकता प्रक्रियाबारे पार्टीपंक्तिलाई जानकारी नदिई नेतृत्वले ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिक’जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कटाक्ष गरे :
– विकास र समृद्धिका पक्षमा जुन जनमत बनेको छ, त्यसलाई लिड गर्छौं भन्ने हाम्रो दाबी जनताले पत्याएका छन् । एउटा पार्टीका लागि यो असाध्यै ठूलो उपलब्धि हो । चुनावमा कुलो, पानी, धारा आदिको कुरा हुने प्रचलन तोड्दै हामीले नयाँ भाष्य बनाउने प्रयत्न गर्‍यौँ– हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढेको, रेल आएको, ठूल्ठूला नहर, बाटाहरू बनेको । चुनावताका हामीले बनाएको यो मनोविज्ञान अझै कायम छ । हामीले जति ठूला कुरा गरेका छौँ, त्यसप्रति छलफल र विमर्शमा हुनुपर्ने जति गम्भीरता देखाउन सकेका छैनौँ । सपना देखाइएको छ । सपनामाथि सपना खप्टिए भने ती दिवास्वप्न–दुस्वप्न अनेक हुन सक्छन् । तसर्थ, हामी आज ती सपनाहरू कसरी पूरा गर्छौं भन्ने कुरा अब जनतालाई भन्नुपर्नेछ ।
यो बहसमा धेरथोर म आफैं पनि संलग्न छु । एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा हामीले जनवादी क्रान्ति सकियो, अब विकास गर्ने भन्यौँ । समृद्धिको यात्रा हुँदै समाजवादतर्फ जाने । राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको तयारी गर्दै समाजवादतर्फ जाने हो । तर, सँगै भन्दै आएका छौँ, हाम्रो उत्पादक शक्तिको मुख्य क्षेत्र भनेको सीमान्त श्रमजीवी नै हो । यसर्थ मेरा लागि यो नयाँ कुरा होइन ।
– सुरुमा हामी केन्द्रीय कमिटीमै नभएकाले उठाएको विचार भएको हुँदा नेतृत्वले ध्यान दिनैपरेन । किनभने, त्यसबेलासम्म हामी उहाँहरूका कार्यकर्ता देखियौँ । केन्द्रीय कमिटीमै भए पनि काँधमा फुली लगाएका हैसियतवाला परिएन । त्यसैले त्यसबेलासम्म हाम्रो कुरा नसुनिनु स्वाभाविक लाग्छ । तर, यिनै बहसका आवाज गुन्जनहरूले हामीलाई केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्‍याए । मिडिया र बौद्धिक बहसमार्फत त्यसलाई धेरै अगाडि लिएर आयौँ । त्यसबेलासम्म नेताहरूलाई यो गम्भीर मुद्दा बन्नेछ भन्ने लागेकै थिएन । मुद्दा त बन्यो, सुरुदेखि नै उहाँहरू त्यसलाई बुझ्न नचाहेका कारण पछिसम्म पनि यसको महत्त्व बुझ्नुभएन । तर, महाधिवेशनमा यो त बहुमतमा जाने भयो । त्यसैले उहाँहरूले विचार र समर्थन गरेको भन्दा पनि यो बहुमतमा जाने भन्दा ल, ल सहमति गरौँ भनेर लगियो । अर्को के भयो भने अध्यक्ष (ओली) बिरामी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैँले महाधिवेशन हलमा उभिएर भन्नुभयो, ‘म बिरामी थिएँ, मलाई यो दस्तावेज के–के बनाउनुभएको छ, त्यो पनि थाहा छैन । तर, जे बनाउनुभयो, त्यो ठिकै छ ।’ भन्नुको अर्थ हाम्रो अध्यक्ष नै विचार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुभएन । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले राखेका विचार नवौँ महाधिवेशनको मूलभूत प्रस्तावना हुनुपर्ने हो, त्यो कुरामाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएन । त्यसले गर्दा आज जुन विकास र तीव्रताको पक्षमा हामी छौँ, त्यो दबाब विचार, छलफल र बहस गर्नुपर्ने दबाब हामीमाथि आएन । त्यसैले योचाहिँ एक हिसाबले भन्दा अपर्याप्त, अपूर्ण छ । इमानका साथ भन्नुुपर्छ, आज विकासको जुन संकल्प हामी गरिरहेका छौँ, त्यसबारे विमर्श भएको छैन ।
– म अझै पनि निरास किन छैन भने यो हाम्रो मात्रै मुद्दा बनेको छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भनेका ७५/८०/९० प्रतिशत चीन र भारत हुन् । यी दुवै राष्ट्रमा तीव्र आर्थिक विकास छ । यो यथार्थ हो । नेपाल समुद्रमा यस्तो टापुजस्तो छ, जहाँ वरिपरि विकास, समृद्धि बलियो बनाउन सक्ने राज्यका अनेक चिज छन् । त्यसबाट हामी अछुतो रहनै सक्दैनौँ । यहाँ बलियो राज्य हुन्छ, यहाँ समृद्धि आउँछ । समृद्धि त्यो बलियो राज्य हो, त्यो कसरी आउँछ ? केही व्यक्ति बलिया हुन्छन् । स्वप्नजीवीहरू बलिया हुन्छन्, तिनको नियन्त्रणभित्र राज्य बलियो हुन्छ ?
– यस्ता प्रश्नमा प्रवेश गर्न बौद्धिक जमात पनि डराएको छ । समृद्धिको ज्वरो यति तीव्र आएको छ कि कसैले यसका बारेमा बोल्न पनि डराइरहेका छन् । मिडियामा पनि समृद्धिको भयंकर कामज्वरो छुटेको छ । बौद्धिक कामज्वरोमै लागेका छन् । कहिलेकाहीँ लाखौँ मान्छे एकैचोटी बहुलाउँछन् । हामीकहाँ पनि कतै यो समृद्धिको बौलाहट बढ्ता जागेको हो कि ? तर गाली गरेर मात्रै सुख पाइँदैन । सचेत नागरिक र यो प्रक्रियामा सहभागीको हिसाबले सामना गरेर जाने हो । हामीले लोकतन्त्रलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवन, यी दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा ध्यान दियौँ भने असाध्यै राम्रा सम्भावना आउँछन् । भू–अर्थराजनीतिका अनेक सम्भावना छन् हामीसँग । धेरै राम्रा सम्भावना पनि छन् । तर, आज छलफल कुराकानी जति चाहिन्थ्यो त्यति हुन पाएको छैन । यसले ढिलो हुन सक्छ । ढिला हुँदा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।
– आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई जना तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर भित्र बसेका छन् । अनि, सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउनेछ भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौँ तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर भन्ने किसिमको रह्यो । हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गर्दा वैचारिक आधार खोज्यौँ– हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक अवस्था छ, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता छ, देशभित्रको राजनीतिक आवश्यकता छ, कम्युनिस्टहरू मिल्दा बहुमत आउँछ, यी नमिलेकाले आएन । यी पार्टी मूलत: राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने मान्यता राख्छन् । सुरुमै सैद्धान्तिक आधारबाट सुरु भयो भन्ने हिसाबले सबिस्तार बहस गरेको भए आजसम्म कार्यकर्ता तल प्रशिक्षित भइसक्थे । र, त्यसले गर्दा हामीले भित्र तान्त्रिक राखेर बाहिर केही आइहाल्छ कि भनेर हेर्नुपर्दैनथ्यो । प्रशिक्षणले नै यो एकता त्यतातर्फ लक्षित हुन्थ्यो । अहिले त कस्तो छ भने अब टेन्टबाट निस्कँदा के भनेर निक्लने हुन् ।
– त्यस्तो कसैले ठान्छ भने राम्रो । किनभने, विचारको कुरामा हामीले दाबी गर्नुपर्छ, हामीलाई छाडेर वाम एकताको वैचारिक पक्ष पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा म तपार्इंहरूलाई साक्षी राखेर बताउन चाहन्छु ।
– कस्तो समृद्धि ? कस्तो राष्ट्रिय पुँजी ? राष्ट्रिय पुँजीका बारेमा संसारैभरि असाध्यै धेरै बहस भएका छन्, त्यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौं ? पुँजीको विकासका क्रममा मान्छेलाई किनारा लगाउँदा वर्ग अन्तर बढ्छ, त्यो अन्तर अझै नबढोस् भन्न हामी कस्तो सोचबाट अघि जान्छौँ आदि मुद्दा पार्टीका मूल विचारसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले मलाई कत्ति पनि भन्न अप्ठ्यारो छैन, हामीलाई छुटाइएकाले नै विचारको समस्या आएको हो । मैले वा कसैले पनि यिनीहरूले हामीलाई लिएनन्, यी अब जहाँसुकै जाऊन् भन्नचाहिँ हुँदैन । यसैलाई जे छ, अब हाम्रो बनाउनुपर्छ ।
– एमाले स्थापित हुने केही ऐतिहासिक कारण छन् । नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने राम्रा नेताहरू जन्माउँदै गयो । मनमोहन अधिकारी यो मुलुक र पार्टीको राम्रो सन्तान । मदन भण्डारी अर्काे एउटा धेरै राम्रो सन्तान । राष्ट्रिय अस्थिरता र गन्जागोलका बीचमा माधव नेपालजीले जुन भूमिका खेल्नुभयो, समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त हो भन्ने सकारात्मक मूल्यांकन गर्छु । किनभने, ०५२–५३ देखि हामी निरन्तर राष्ट्रिय संकटको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा गरौँ, नत्र राष्ट्रिय अस्तित्व बर्बाद हुन्छ भन्दै आयौँ । यो विचारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । अस्ति प्रचण्डजीले बैठकमै भन्नुभयो, ‘एमाले नभएको भए त्यसबेला जनयुद्धको रक्षा हुँदैनथ्यो ।’
-उहाँले गरेको ऐतिहासिक टिप्पणी, जुन ठीक हो, यहाँ मैले त्यसको कुरा गरेको हो । किनभने, यो प्रक्रियाको नेता माधवजी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, झलनाथ खनाल छोटो समयका लागि अध्यक्ष हुनुभो । आफ्नो कार्यकालमा उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो । दुइटा कुराको श्रेय उहाँलाई दिन्छु । नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने विचारको खास नेता झलनाथ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो, माओवादीले हामीलाई युद्ध हारेको दासजस्तो व्यवहार गथ्र्यो । त्यस्तो बेला एमालेभित्र अनेक कचिंगल थिए । तर, अनेक आरोप, अपमान सहेर भए पनि उहाले पार्टीलाई बचाउनुभयो ।
– ओलीजीको नेतृत्वमा हामीले राजनीतिक मोर्चामा एकपछि अर्काे उपलब्धि प्राप्त गर्दै आएका छौँ । संविधान जारी गर्ने बेला, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने बेला, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेला, अनि मैले तान्त्रिकजस्तो भने पनि पार्टी एकताको पहल लिने बेला उहाँको नेतृत्व कौशल देखिएको छ ।
– टेन्टबाट निक्लेका बेला दुई तान्त्रिकको अनुहार हेरेर अनुमान लगाउने । भित्र आलिंगन गरेर निक्ले कि धक्का–मुक्का गरे भन्ने कुरा टेन्टबाट निक्लँदा उनीहरू कस्ता देखिएका छन्, हेर्ने । तर, यिनीहरू धक्का–मुक्का गरेर निक्ले पनि भोलि आलिंगन गर्दै आउन सक्छन्, आलिंगन गरे भने पनि लठ्ठीले हिर्काएर धक्का–मुक्का गर्ने सम्भावना उति नै छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रिया कमजोर हँुदा यस्तै हुन्छ